Ihu igwe: ihe ọ bụ, ụdị ihu igwe na njirimara | Netwọk Mgbasa Ozi
Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ihu igwe
na ihe omumu banyere ala Ha bụ ndị na-akpụzi ọdịdị ala ma gbanwee àgwà nke nkume na enyemaka. Isi ihe ndị dị na mbara igwe bụ mbuze, ịkwaga na sedimentation. Otu n'ime ụdị mbuze bụ ihu igwe. Ọ bụ usoro nke ịkụ ma ọ bụ ire ere nke nkume na mineral ndị dị n'elu ụwa.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe ihu igwe bụ, ụdị dị ebe ahụ na otu o si emetụta mmụọ nke mbara ala.
1 Gịnị na-eme ihu igwe
2 Ofdị ihu igwe
2.3 Oge ndu ndu
Gịnị na-eme ihu igwe
Dịka anyị kwurula, ọ bụ nsonazụ mgbanwe nke okwute na mineral na-enweta mgbe ha nọ n’elu ụwa. Mgbanwe ndị a bụ n'ihi na-aga n'ihu na kọntaktị nke otu ihe ahụ na mbara igwe, biosphere, hydrosphere ma ọ bụ ụfọdụ ndị na-ahụ maka ọdịdị ala dịka ikuku na ihu igwe. Mgbanwe nke nkume nwere ike ibute ịbawanye olu ya, belata nkwụsịtụ ya, belata nha nke ahụ ma ọ bụ ọbụna mepụta mineral ndị ọzọ.
Enwere otutu ihe omumu nke gosiputara na ihu igwe bu ihe ndi ozo. Nke ahụ bụ ịsị, ihu igwe a nwere nnukwu mkpa na nyocha nke ụdị enyemaka. Mgbe anyị lere anya na enyemaka nke odida obodo, anyị ga-amarịrị na agbanweela ọdịdị ala ahụ site na ọtụtụ ijeri afọ. Ma nke a bụ na ndị na-ahụ maka ọdịdị ala anaghị eme ihe gbasara mmadụ. Ọnụ ọgụgụ anyị ga-eburu n'uche na nke a bụ nke geological oge.
Ekwesịrị ikwu na mbuze na-aga n'ihu site na ifufe ma ọ bụ mmiri nwere ike ịgbanwe enyemaka ma ọ bụ gbanwee nguzobe nkume, mana ọ bụrụhaala na afọ zuru ezu gafere maka mmetụta a ga-adị mkpa na nhazi nke ọdịdị ala. Oge a Ha na-akwado ọdịiche nke ụdị ala dị iche iche yana nghọta nke ogige ha na nri ha.
Otu n’ime ihe ndị bụ isi na-eme ka ihu igwe dịgide bụ ihu igwe, oge ihe ndị a na-eme na ya, na ihe ndị e ji mara okwute. Dabere na agba, fissure, akụkụ nke mineral na njirimara ndị ọzọ, ihu igwe ya ga-eme n'oge na-adịghị anya.
Thezọ nke nkume si agbanwe agbanwe abụghị otu ụzọ. E nwere ụdị ihu igwe abụọ dị na mbido ya. Anyị nwere otu ihu igwe na-ekpuchi ihu igwe na, na aka nke ọzọ, ihu igwe nkịtị. Enwere ụfọdụ ọmụmụ na-agbakwunye ụdị ihu igwe nke atọ na ọ bụ ndu. Anyị ga-agbaji ma nyochaa ụdị nke ọ bụla.
Typedị ihu igwe a na-eme ka nkume gbajie. Ọnweghị n'okpuru ọnọdụ ọ na-emetụta ya chemical ma ọ bụ ịnweta mejupụtara. N'oge usoro ihu igwe nkịtị, nkume ndị ahụ ji nke nta nke nta na-agbawa ma kwe ka mbuze mee ihe kachasị mma. Enwere ike ịghọta nsonaazụ mgbanwe na ọnọdụ anụ ahụ nke oke okwute. Ọnọdụ nke ihe dị iche iche gburugburu ebe obibi na-agbanwe agbanwe mgbe niile, n'etiti ndị na-esonụ pụtara:
Mgbagha: ọ bụ mgbaji ọkpụkpụ na nkume ndị etolitela ugbu a. Ọkpụkpụ ndị a ma ọ bụ mgbawa a na-eme ọbụlagodi mgbe nrụgide adịghị elu. Ihe ndị a na-amalite na nkume ndị e guzobere na ntanetị.
Thermoclasty: ọ dịka ọrụ nke ọnọdụ okpomọkụ dị iche iche dị n'etiti ehihie na abalị. Enwere ike ịkọwa ya dị ka a ga - asị na ọ bụ nsogbu dị n'etiti okpomọkụ dị n'ime ya na nke gbara ya gburugburu. Mgbanwe ndị a dị egwu nke na-eme n'ọzara ụfọdụ na-akpata mgbawa na nkume. N'ehihie, anyanwụ na-eme ka nkume ahụ kpoo ọkụ ma gbasaa, n'abalị ọ na-eme ka ọ dị jụụ ma gbagọọ. Usoro ndị a na-aga n'ihu nke mgbasa na mgbatị bụ ihe na-akpata mgbawa na-agbaji nkume.
Ntughari: ọ bụ mgbawa nke nkume ahụ site na mmanye nke obere obere ice nke etinyere na ya. Na, mgbe mmiri oyi, ọ na-eme ka olu ya dị elu ruo 9%. Mmiri a, mgbe ọ dị n'ime nkume, na-ebute nrụgide na mgbidi nkume ndị ahụ ma mee ka ha gbawaa nke nta nke nta.
Mberede: Nke a bụ usoro nnu ji arụ ọrụ na nkume nke na - ewepụta ya. Ihe ndị a bụ nnu dị elu dị na ogbe dị iche iche. Mgbe mmiri ozuzo na-ezo, nnu na-asachapụ ma na-agbago n’elu okwute ahụ. N'ụzọ dị otú a, na nnu na-arapara na mgbawa na ogwe osisi na, ma ọ bụrụ na a kpụchaa, ha na-eweli olu ha, na-amụba ikike na nkume ndị ahụ ma na-eme ka mgbawa ha pụta. N'ọtụtụ oge, anyị na-ahụ nkume angular nke obere nha nke usoro a mepụtara Haloclasty.
Nke a bụ usoro nke na-ebute mwepụ nkekọ na nkume. Ihe mgbanwe dị iche iche nke ikuku dị ka oxygen, carbon dioxide na alụlụ mmiri na-emetụta okwute. Enwere ike ịghọta ihu igwe dị iche iche site na usoro dị iche iche. Ka anyi kọwaa ihe ọ bụla:
Oxidation: Ọ bụ maka mmekọrịta dị n'etiti mineral na ikuku oxygen na ọdịiche ya na-aga n'ihu.
Mkpebi: ọ dị ezigbo mkpa na mineral ndị ahụ na-agbaze na mmiri.
Carbon: ọ bụ banyere njikọta na mmetụta nke njikọ nke mmiri na carbon dioxide.
Hydration: Ọ bụ ogbo nke ọtụtụ mineral na-agbakọta ma mepụta mmụba nke oke nkume. Ihe atụ nke ha ihe na-eme plasta.
Hydrolysis: ọ bụ maka mmebi nke ụfọdụ mineral maka ọrụ nke puku ijeri hydrogen na-eme hydroxide na mmiri.
Mmiri nyocha: ọ bụ disintegration nke ndu mmadụ na-adị na ala ma na-enye guzobe organic asịd.
Oge ndu ndu
Typedị ihu igwe a bụ ihe ụfọdụ ndị ọkachamara kwukwara. Ma ọ bụ na alaeze anụmanụ na ahịhịa na-ahụkwa maka ihu igwe dị na mpụga. Omume nke ụfọdụ mgbọrọgwụ, organic asịd, mmiri ha na-agbanwe mmewere nke okwute. Tụkwasị na nke ahụ, ụfọdụ ihe ndị dị ndụ dị ka okpuru ụwa nwekwara ike igbanwe ụdị okwute.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu gbasara ihu igwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ihu igwe